13 အောက်တိုဘာ၊ 2019
နီပေါလ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ကြိုဆိုသည့် ကလေးငယ်များ နှုတ်ဆက်နေသည့် တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping. (အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉)
တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping ဟာ စနေနေ့မှာ နီပေါလ်နိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွင်း တရုတ်သမ္မတတဦးရဲ့ ပထမဆုံး နီပေါလ်ခရီးစဉ်ဖြစ်သလို နှစ်နိုင်ငံကြား ပင်မအခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောတူညီချက်တွေ လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ ဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ တရုတ်သမ္မတ Xi ဟာ အိန္ဒိယကနေ နီပေါလ်ကို စနေနေ့မှာ ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်တို့နဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရာမှာ နီပေါလ်အနေနဲ့ သတိကြီးကြီးထား လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နီပေါလ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အိန္ဒိယက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသလို နီပေါလ်ရဲ့ မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းဒေသ တလျှောက်ဟာလည်း တရုတ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေတာပါ။
တရုတ်သမ္မတ Jiang Zemin လက်ထက် ၁၉၆၆ ခုနှစ်က နီပေါလ်ကို တရုတ်သမ္မတတဦးအနေနဲ့ နောက်ဆုံးသွားရောက်တာ ဖြစ်ပေမယ့် တခြား တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ အပါအဝင် တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ အဲဒီအချိန်ကတည်းကစပြီး နီပေါလ်ကို တရားဝင်ခရီးစဉ် မသွားရောက်ကြပါဘူး။
အခု တရုတ်သမ္မတ Xi လာရောက်ချိန်မှာ နီပေါသမ္မတ Bidhya Devi Bhandari နဲ့ နီပေါလ်ဝန်ကြီးချုပ် K.P. Sharma Oli တို့က Kathmandu လေဆိပ်မှာ သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပမယ့် တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းဒေသ ကျော်ဖြတ်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာနဲ့ နေရပ်ရင်း ပြန်ပို့ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို အဓိက ဆွေးနွေးနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိသလို နီပေါလ်က Kathmandu နဲ့ တိဘက်က Keirung ကြား ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ စီမံကိန်းကိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
တရုတ်သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ဆန္ဒပြမှုတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ သောကြာနေ့ကစပြီး တိဘက်ကနေ လာရောက်ခိုလှုံနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တချို့ အပါအဝင် လူပေါင်း ၂၂ ယောက်ကို ရဲတွေက ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
တရုတျသမ်မတတဦး၏ နှဈ ၂၀ ကြျောအတှငျး ပထမဆုံး နီပေါလျခရီးစဉျ
တရုတျသမ်မတ Xi Jinping ဟာ စနနေမှေ့ာ နီပေါလျနိုငျငံကို သှားရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ နှဈပေါငျး ၂၀ ကြျောအတှငျး တရုတျသမ်မတတဦးရဲ့ ပထမဆုံး နီပေါလျခရီးစဉျဖွဈသလို နှဈနိုငျငံကွား ပငျမအခွခေံအဆောကျအအုံဆိုငျရာ စီမံကိနျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သဘောတူညီခကျြတှေ လကျမှတျရေးထိုးမယျလို့လညျး ခနျ့မှနျးကွပါတယျ။
အိန်ဒိယမှာ ဝနျကွီးခြုပျ Narendra Modi နဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ တရုတျသမ်မတ Xi ဟာ အိန်ဒိယကနေ နီပေါလျကို စနနေမှေ့ာ ရောကျသှားတာဖွဈပါတယျ။ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံကွီး နှဈနိုငျငံဖွဈတဲ့ အိန်ဒိယ၊ တရုတျတို့နဲ့ ဆကျဆံရေး တညျဆောကျရာမှာ နီပေါလျအနနေဲ့ သတိကွီးကွီးထား လုပျဆောငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
နီပေါလျနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေးနဲ့ နိုငျငံရေးမှာ အိန်ဒိယက ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ လှမျးမိုးမှုရှိနသေလို နီပေါလျရဲ့ မွငျ့မားတဲ့ တောငျတနျးဒသေ တလြှောကျဟာလညျး တရုတျနဲ့ နယျနိမိတျခငျြး ထိစပျနတောပါ။
တရုတျသမ်မတ Jiang Zemin လကျထကျ ၁၉၆၆ ခုနှဈက နီပေါလျကို တရုတျသမ်မတတဦးအနနေဲ့ နောကျဆုံးသှားရောကျတာ ဖွဈပမေယျ့ တခွား တရုတျဝနျကွီးခြုပျတှနေဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတှေ အပါအဝငျ တရုတျခေါငျးဆောငျတှကေတော့ အဲဒီအခြိနျကတညျးကစပွီး နီပေါလျကို တရားဝငျခရီးစဉျ မသှားရောကျကွပါဘူး။
အခု တရုတျသမ်မတ Xi လာရောကျခြိနျမှာ နီပေါသမ်မတ Bidhya Devi Bhandari နဲ့ နီပေါလျဝနျကွီးခြုပျ K.P. Sharma Oli တို့က Kathmandu လဆေိပျမှာ သှားရောကျကွိုဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ တရုတျသမ်မတရဲ့ ခရီးစဉျအတှငျး တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ကငျြးပမယျ့ တရားဝငျဆှေးနှေးပှဲမှာ ဟိမဝန်တာတောငျတနျးဒသေ ကြျောဖွတျဆကျသှယျမှုဆိုငျရာနဲ့ နရေပျရငျး ပွနျပို့ရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျတှကေို အဓိက ဆှေးနှေးနိုငျဖှယျရာ ရှိသလို နီပေါလျက Kathmandu နဲ့ တိဘကျက Keirung ကွား ရထားလမျးဖောကျလုပျဖို့ စီမံကိနျးကိုပါ လကျမှတျရေးထိုးမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
တရုတျသမ်မတရဲ့ ခရီးစဉျအတှငျး ဆန်ဒပွမှုတှကေို ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ သောကွာနကေ့စပွီး တိဘကျကနေ လာရောကျခိုလှုံနတေဲ့ ဒုက်ခသညျတခြို့ အပါအဝငျ လူပေါငျး ၂၂ ယောကျကို ရဲတှကေ ထိနျးသိမျးထားပါတယျ။